भाई अस्पतालमा, जेठाजु ६३ वर्ष उमेरका छन, तर ब्यहोरा राम्रो छैन भन्छिन बुहारी …! – ebaglung.com
भाई अस्पतालमा, जेठाजु ६३ वर्ष उमेरका छन, तर ब्यहोरा राम्रो छैन भन्छिन बुहारी …!
२०७४ चैत्र २९, बिहीबार १९:४३	Top News, अन्य समाचार
प्रेम सुनार, गुल्मी २०७४ चैत २९ । छिमेकी जिल्ला अर्घाखाँचीमा एक जना हिंश्रक पुरुषलाई गत चार दिन देखि कोठामा थुनेर बन्धक बनाईएको छ । निज जेठाजुले भाई वुहारीलाई रातै दिन आक्रमण गर्न थालेको र प्रहरी प्रशासनबाट पनि सुरक्षा नदिएको भन्दै त्यहाँका महिलाहरुले बुहारीको ज्युधनको रक्षाका लागि ती जेठाजुलाई गत चार दिन देखि कोठामा थुनेको बताए ।
मालारानी गाउँपालिका वडा नम्वर ४, साविकको खनदह गाविसको बडाचौर निवासी चन्द्रबहादुर खनालले दैनिक जसो आफ्नी भाई बुहारी उमा खनाललाई आक्रमण गर्दै आए पछि स्थानिय महिला सञ्जाल जुटेर निज जेठाजुलाई उनकै घरको कोठामा थुनेर बन्धक बनाएका हुन ।
केहि महिना अघि वुहारीको रकम र जिन्सी चोर्ने, जलाई दिने गरेको विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय अर्घाखाँचीमा उजुरी दिए पनि निज माथी सामन्य तारिखमा राखिएर कार्वाही नगरी छाडि दिए पछि निज जेठाजुले गाउँभरी नै आतंक मच्चाएको स्थानिय महिला सञ्जालले बताए ।
पीडित भाई वुहारीरुँदै भन्छिन्–‘ मैले प्रहरी पंशासनबाट पनि न्याय पाउन सकिन , मेरो अस्मीता समेत असुरक्षित हुने देखेर महिला सञ्जाल संग गुहार मागेकी हुँ । उहाँहरुले उनकै घरमा थुनेर बचेकी छु । श्रीमान भारतमा काम गर्ने र अहिले विरामी परेर काठमाडौं उपचार गर्दै हुनुहुन्छ ।
जेठाजु ६३ वर्ष उमेरका छन तर ब्यहोरा राम्रो छैन् । अश्लील शव्द बोल्ने , भाईलाई म तेरी श्रीमति संग बस्छु भन्ने , म आफैलाई पनि सुत्न आईजा भन्ने जस्ता अस्लील कुरा गर्छन् । म छुट्टिएर बसेकी छु । म यति धेरै अशुरक्षित हुँदा पनि प्रहरीबाट सुरक्षा पाईन ।
उनले फोन गरेर यस हरफकारलाई भनिन् जेठाजुले उनकै घरमा पनि श्रीमती र परिवारका अन्य सदस्यलाई भागाभाग पार्छन । पानी तताएर अरुको शरीरमा राख्न खोज्ने, अरुलाई हान्न घर दलान भरी ढुङ्गा थुपारेर राख्ने , हसिया, कोदालो बञ्चरो प्रयोग गर्ने गर्दछन् ।
म मात्र होईन स्थानिय महिलाहरु पनि बाटो घाटोमा असुरक्षित हुने भए पछि थुनेर राखेका हुन् । जेठाजुले मेरो घर समेत विगार्न आँटोको छ म कहाँ गएर वसुँ सर ? भन्दै उनले डाँको छाडिन । स्थानिय महिला सञ्जालकी सदस्य कमला बिकले ति जेठाजुलाई दिमागी समस्या नभएको तर प्रवृत्ति त्यस्तै देखाउँदै आएको बताउँ छिन् ।
हामी यहाँका महिलाहरु असुरक्षित भयौं ढोकाबाट निस्कियो कि ढुङ्गा हान्दै र जथाभावी फलाक्दै हिड्छ, उनले भनिन, तपाई छिट्टै आई दिनु प¥यो । स्थानिय महिलाहरुले दिमागी समस्या ठिक भएको , श्रृगिएर त्यस्तो आतंक मच्चाएको बताए पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय अर्घाखाँचीका प्रमुख डिएसपी एकनारायण कोईरालाले निजमा अलिकति दिमागी समस्या हो कि जस्तो लागेको बताए ।
‘कसैका वाख्रा चोर्ने त कसैको अरु विठ्याँई गर्ने जस्ता कृयाक्लाव गरे पछि निजलाई नियन्त्रणमा पनि लिएको हो । पछि अस्पताल लगियो , त्यहाँबाट वुटवल रिफर गरिएको हो । डाक्टरले पनि मानिसिक विमारी भनेर नलेखे पछि हामीले केहि बोल्न मिलेन उनले भने–‘यदि त्यहाँका महिलाहरु त्यसरी असुरक्षित भएकै भए मैले त्यहाँ गस्ती बढाउन लगाउँ छु भर्खरै ।’
यो समाचार लेख्दा लेख्दै फेरी फोन गरेर डिएसपी कोईरालाले भने मैले खनको ईन्सपेक्टरलाई त्यहाँ खटाई सकेको छु ।
गुल्मी शान्तिपुरमा अशान्ति : सम्धी-सम्धिनी, सासू-बुहारी बीच भिडन्त !
प्रवास : बेल्जियममा नेपाल महोत्सव र नयाँ वर्षको तयारी अन्तिम चरणमा !